Magaalaa Naqamteetti biiftuuwwan sadii mul’atan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Magaalaa Naqamteetti biiftuuwwan sadii mul’atan
On May 25, 2021 80
Finfinnee, Caamsaa 17, 2013 (FBC)-Godina Wallagaa Bahaa magaalaa Naqamteetti biiftuuwwan sadii har’a mul’ataniiru.
Har’a ganama naannawa sa’aatii 3:00tti biiftuun sadii kan muul’atan.
Taateen akkanaa kanaan dura Itoophiyaa keessatti mul’achiifi dhiisuunsaa qabatamaan beekamuu baatus Chaayinaatti yeroowwan baay’eedhaaf irra deddeebiin waan mul’atuuf taatichi haaraa ta’uu dhabuu ragooleen akka muul’dhisaan ragaan Waajjira Dhimmoota Komiikeeshinikii mootummaa magaalaa Naqamteerraa argamee ni muul’dhisa.
nistiityutii Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii Ityoophiyaa, Wiirtuu Mil’annaa fi Qorannaa Inxooxxootti Qajeelcha “Astronomy and Astrophysics Research and Development” jedhumurraa Dooktar Sabluu Humnee, balaqqeessi akkanaa haaraa miti, darbee darbee ni uumama jedhaniiru.
Chaayinaattillee uumamee ture. Taatechis biiftuun sadii ta’ee mul’achuu otoo hintaane, isuma jirutu balaqqeessa’ee mul’ata jedhan.
Namni dhuunfaa gogaasaa seentii meetira 15.5 harkisu namoota hedduu dinqisiise
Shakkamaan waraqaa eenyummaa fi sanada sobaan Birrii Kuma…
Zimbaabween namticha uffata ‘ekeraan’ nama saamu…